Zvinonakidza uye Zviitiko muIndia | Kufamba Nhau
Zvinonakidza uye Zviitiko muIndia
Maria Jose Roldan | | India, Kufarira, Asia kufamba
Kana iwe uchida kuenda kuIndia saka unogona kunge uri kuronga rwendo rwako kwenguva yakareba, zvakajairika. Kuti uende kuIndia zvinotora nguva yakareba kuti unakidzwe nezvose zvayinofanira kupa, rwendo rwemazuva mashoma runenge rwakapfupika. Chii chimwe, Kana iwe uchida kuenda kuIndia iwe unofanirwa zvakare kuziva mushe kwaunoda kugara nebhajeti yauinayo. KuIndia kune mitengo yemarudzi ese, asi zvichienderana nemitengo iwe unogona zvakare kuve nekuwedzera kana kushoma kunyaradzwa, izvi zvinoenderana nezvinodiwa zvako pachako.
Asi mukuwedzera pakutora zvese izvi uchifunga kana uchienda kuIndia, iwe zvakare uchazoda kuziva izvo zvavanonyanya kufarira zvinokwezva uye zviitiko zviri kuitira kuti uronge zviri nani rwendo rwako. Nhasi ndinoda kutaura newe nezvezvimwe zvakakosha uye zviitiko muIndia kuitira kuti ugone kusarudza rwendo rwako.
MuIndia unogona kuve nezvakawanda zvinokwezva uye zviitiko zvekuita, pamusoro pekushanyira nzvimbo dzinoshamisa kuti unakirwe nezororo kana rwendo rwakanakisa.
1 Guta reDhihi
2 Kushanyira kune inoshamisa Taj Mahal mausoleum
3 Mapaki eIndia
4 Gwenga Guru reIndia
5 Nzvimbo dzinoyera
6 Yekushanya zviitiko
New Delhi yakakamurwa kuita zvikamu zviviri, Old Delhi uye Yemazuva ano kana New Delhi. Iyo yekupedzisira iguta remazuva ano rine zviitiko zvakawanda zvekuita uye zvipingamupinyi zvazvino uno zvinotora mweya wako. Old Delhi ine migwagwa yakamanikana uye tembere dzinoshamisa, hapana mubvunzo kuti kune vashanyi vazhinji vanosarudza kurasika muDhehli yekare. Iwe haugone kupotsa Red Fort naJama Masjid, Musiki mukuru weIndia, haugone kupotsa shasha yeOutab Minar Tower futi.
Kana iwe uchida kuona inoshamisa pikicha Iwe haugone kukanganwa kushanya kuGolden Triangle. Iyo Golden Triangle iri pamutsetse wakadhirowewa pakati peDelhi, Agra neJaipur. . Mukona yekumaodzanyemba yeatriangle ndiAgra, anozivikanwa neTaj Mahal. Mukona yekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero ndeyeJaipur, muRajasthan, kumba kweAmber Palace uye Imba yeMhepo.
Kushanyira kune inoshamisa Taj Mahal mausoleum
Iyo Taj Mahaj muAgra inozivikanwa pasi rese uye iri chena machena machena machena mausoleum ayo yakavakwa pakati pa1632 na1653 nekuraira kwaMughal Emperor Shan Jahan mundangariro dzemukadzi waanoda kwazvo. Iyo Taj Mahal inonzi zvakare: "misodzi padama rekusingaperi" uye ndeimwe yehunyanzvi hwekuvaka kwaMughal uye ndechimwe chezvivakwa zvakakosha muIndia.
Zvakare, iyo chena dome yeTaj Mahal iyo marble mausoleum uye ini ndinosanganisira zvimwe zvivakwa zvakanaka, mitumbi yemvura, yakawanda yekushongedza mapindu ane miti, maruva uye akanaka shrub. Runako kuti kana ukazviona mumunhu wekutanga hazvizokusiya usina hanya.
India haina pasi pemakumi manomwe emapaki emunyika uye chikamu chayo chinewo 70 tiger matura uye mazana mana emhuka dzesango munyika.. Kuti uwane nguva yekuvashanyira vese, iwe ungatoda mwedzi yakati wandei yezororo ... saka zano rimwe chete nderekuti iwe utsvage ruzivo nezve chimwe nechimwe chazvo uye kuti nenzira iyi unogona kusarudza iyo yaunoda kwazvo kuenda kana iyo iri padyo nenzvimbo yauchazogara.
Ingwe yeIndia neAsia Elephant zvakazara mudunhu, asi kana iwe uchida kuziva inonyanya kuzivikanwa nzvimbo yekuchengetedza uye uchida kushanyira iyo kuti ugone kudanana nezvose zvayinopa, saka usapotsa Rajasthan's Bharatpur National Park uye Bengal Sundarban National Park.
Gwenga Guru reIndia
In kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva India unogona kuwana iyo Great Desert inozivikanwawo seThar. Iri renje rinofukidza nzvimbo inosvika makiromita mazana masere nemakumi mana nemakumi mana nemakumi mana pakureba. Hapana kana chinhu! Kune maguta mukati megwenga iri semaguta eRajhasthan uye kana iwe ukavashanyira, uchaona kuti ari kupenya zvisingaite. Maguta ane mukurumbira ekushanyira ndiJaisalmer nekuda kweMutambo waro weDesert uyo unoitwa mumwedzi waNdira naFebruary kana guta rePushkar kunoitirwa Kamera Fair munaNovember.
Pamusoro pezvese izvi, iwe unogona zvakare kuwana nhare, dzimbahwe uye tembere dzeakakura enhoroondo uye ekuvaka kukosha.. Asi kana iwe uchida kushanyira Rajhasthan haugone kukanganwa Udaipur, yakanakisa nzvimbo yekuenda nemumwe wako sezvo iri yekudanana kwazvo. Fungidzira kana iri yerudo zvekuti kune vanhu vanodana nzvimbo ino kuti "Venice yeEast". Guta rakavakwa rakakomberedza Lake Pichola uye Lake Palace inzvimbo iyo iwe yaunogona kugara kutsigira hupenyu mugwenga (nekuda kwedziva).
Pamwe iwe unoziva kuti India ndeimwe yenzvimbo dzinonamata zvakanyanya uye ndosaka iwe usizokwanisa kupotsa dzimwe nzvimbo dzayo dzinoyera, kunyangwe paine huwandu hwakawanda hwezvitendero zvakasiyana zvinogara pamwe chete. Vanhu vanoremekedza zvitendero zveumwe neumwe, achive muenzaniso wakanaka wekuregerera zvechitendero kune vese.
Chitendero chakakurumbira muIndia chiHindu uye zvinogona kutonzi ndicho chimwe chezvitendero zvekare pasi rose. Iyo yeHindu caste system inoita basa rakakosha muhupenyu uye nzanga yevanhu muIndia. Imwe yenzvimbo dzinonyanya kukosha dzausingafanire kupotsa mukana wekushanya iVaranasi, inova nzvimbo yekunamata yenyika yechiHindu uye inogara dzimba dzisingasviki zviuru nezviuru zvevafambi pagore.
Iwe unofanirwa zvakare kushanyira Puri pamhenderekedzo yeBay of Bengal inova imwe yenzvimbo huru dzekufambira muIndia uye inozivikanwa nekuonga nekuda kweJagannat Temple.
Uye zvakare, kwese kuIndia kune zvakare nzvimbo dzinove dze zvimwe zvitendero zvakadai seBuddha, Sikhism, uye chiKristu.
Asi kana uchiwedzera pakuziva iyo dhizaini, vanhu vayo, tembere uye yakareba etcetera, iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti kuIndia kune nzvimbo dzakabatana nemitambo yemitambo kuitira kuti iwe uwane zororo. izere nekuita uye adrenaline.
Unogona kuwana makomo kuti usvetuke munguva yechando, nzizi nemapopoma kuti udzidzise mitambo yemvura ine njodzi, mahombekombe emahombekombe, masango anoshamisa ... MuIndia unogona kukwirisa, kutsvedza, kukwira, kumhanya, mvura uye nenjodzi mitambo, gorufu ... Iwe uchafanira chete kusarudza nzvimbo uye chiitiko chaunoda kuita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Asia kufamba » Zvinonakidza uye Zviitiko muIndia
pueeeeeeeeeeeeeeeee Ndazviona zvichinyatso kugadzira kubva kune vanobva kuIndia, ndinokutendai zvikuru kune avo vese vanogara muIndia nekuva mumwe muhupenyu ndinokuda
hauna ruzivo akadaro
Kuti ndine rumwe ruzivo nekuti haruna kundibatsira zvachose, rwakashata kwazvo
Pindura kwauri hauna ruzivo
Nzvimbo nomwe dzinokosha muSan Isidro
Mapaki makuru mashanu sechipo Chekutanga Chirairo